वाह नेत्र ! अमेरिकामा नेपालीभाषी भुटानीका हीरा – Dcnepal
वाह नेत्र ! अमेरिकामा नेपालीभाषी भुटानीका हीरा
३३ डलर बोकेर अमेरिका उडेका उनले यसरी फैलाए व्यापारको साम्राज्य
प्रकाशित : २०७८ पुष २४ गते ७:२७
अमेरिका। झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिवीर छोडेर आइओएमको बसमा सात समुन्द्रपारिको देश अमेरिका उड्न काठमाडौ लाग्दै गर्दा नेत्र आचार्यका मनमा अनेक कुरा मडारिए, अरुको देश के होलाकसो होला। नचिने नजानेको ठाँउ, नजानेको देशकहाँ पु¥याउने हो थाहा थिएन। भाषानि अर्कै, धर्म नि अर्कै, बरु दुःखजिलो गरेर नेपालमै बसिएकै थियो।
काठमाडौबाट अमेरिकाको फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट उड्दै गर्दा उनको मानसपटलमा जीवनको ठूलो सपना थिएन, जसो तसो सानो तिनो काम गरेर खाउला खुशीसाथ बाचौंला भन्नेसम्म थियो। २०११ को फेबु्रअरी १८ मा पेन्सिलभेनियाको ह्यारिसबर्ग उत्रिँदा नेत्रसँग हातमा जम्मा जम्मी ३३ डलर थियो काठमाडौंमा साटेको।
खाना बनाउने किचनको क्याविनेट बनाउने वायर हाउस (फ्याक्ट्री) मा सामान्य मजदुरको रुपमा काम थालेका नेत्रले कहिल्यै सोचेका थिएनन् कि भोलि कुनैदिन अमेरिकामा समुदायको वाहवाही पाउने गरी छलाङ मारौंला भनेर।
भात झोलामा बोकेर कम्पनी धाएर घण्टे काम गर्ने उनले सोच्नु पनि कसरी? तर अवसरै अवसरको यो भूमिमा उनका लागि एउटा यस्तो नसोचेको अवसर आयोे जसले उनको जीवनको गाथा बदलिदियो, त्यो थियो होम केयरको जागिर।
होम केयरबाट फड्को
अमेरिकाका केही राज्यमा असक्त, बिरामी बृद्धबृद्धा, तथा अपांगता भएकाहरुलाई राज्यले घरमै केयर गिभर सुबिधा उपलब्ध गराउँछ। असक्त, बिरामी बृद्धबृद्धा, तथा अपांगता भएकाहरुलाई आफ्नै परिवार, छोराछोरी, आफन्तले केयरगिभरको रुपमा हेर्न पाउँछन्।
राज्यले अबस्था हेरेर घरमै नर्समार्फत घरमै स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता प्रदान गर्छ। राज्यले दिने यो सुविधाहोम केयर एजेन्सीले ‘मिडिएटर’बनेर सर्बसाधारणलाई दिने काम गर्छ। भखर्र भर्खर अमेरिका आएको कलिलो नेपालीभाषी भुटानी समाजमा यो कुरा थाहै नभएको अबस्थामा पहिलो पटक नेत्र ट्रिमेड नामक होमकेयर एजेन्सीमा २०१३ मा जागिर खान पुगेका थिए।
नेपालीभाषी भुटानी समुदायका अगुवा तथा होमकेयर ब्यवसायी नारद पोखरेल भन्छन्, ‘आज हाम्रो समाजको ठूलो हिस्सा होम केयरको ब्यबसायमा छ, तर शुरुबातमा यो बाटो समात्ने श्रेय नेत्रलाई जान्छ।’ होमकेयरको क्षेत्रमा पहिलो काम गर्ने उनी नै थिए। समुदायले उनैमार्फत यो क्षत्रेको धेरै कुरा जान्न पायो।
पछिल्ला वर्षहरुमा भुटानी नेपाली समुदायमा यो कार्यमा संलग्न हुनेहरुको लहर नै चलेको छ। ओहायो राज्यको कोलम्बस, सिन्सीनाटी, एक्रोन, पेन्सिलभेनिया राज्यको ह्यारीसवर्ग, पिट्सवर्ग, इरि लगायतका शहरहरुमा बग्रेल्ती होमकेयर ब्यवसाय खुलेका छन् हिजोआज।
नेपालीजातिको स्वभाव नै हुन्छ कुनै काम तन, मनले गर्छ। मन, बचन र कर्मले यो क्षेत्रमा दत्तचित्त भएर लागेका नेत्रलाई उनको कार्यलयले काममा लागेको एक बर्षपछि पेन्सिलभेनिया राज्यको ‘रिजनलडाइरेक्टर’ बनाइ दियो।
उनले ५ वर्षको अवधिमा निकै ठूलो ब्यवसायिक छलाङ मारेका छन्। क्रिएटिभबाट शुरु भएको ब्यवसायिक यात्रामा गोल्डेन होम केयर, किङग्स होम हेल्थ केयरसम्म पुगेको छ जसको बजार फैलावट पेन्सिलभेनिया राज्यका ह्यारिसवर्ग, ल्यांकाष्टर, म्याक्यानिसवर्ग, पिट्सवर्ग, गरी ६ मुख्य शहरमा फैलिएको छ। यो राज्यमा ४० हजार हाराहारी नेपालीभाषी भुटानी बस्छन्।
केही वर्षको होमकेयरको अनुभवपछि उनमा आफैं केही गर्ने हुटहुटी चल्यो, तर बाधक बन्यो काम गरिरहेका एजेन्सी, जसमा अरु केहीवर्ष काम गर्ने करारनामा गरेका थिए उनले। तथापि आफ्ना दुई भाइ नविन्द्र आचार्य र उदय आचार्यलाई अघि सारेर शुरु गरे क्रियटिभ होम केयर।
एउटा भनाइ छ ‘सपना त्यो हैन जुन हामी निदाएपछि देख्छौं, सपना त त्यो हो जस्ले निदाउन दिँदैन।’ हो त्यो उनलाई निदाउन नदिएको सपनासँगै तन, मन धनदिएर शुरु गरेको यो ब्यवसायबाट उनले ५ वर्षको अवधिमा निकै ठूलो ब्यवसायिक छलाङ मारेका छन्।
जुन सामान्य मान्छेका लागि त्यति सहज छैन। क्रिएटिभबाट शुरु भएको ब्यवसायिक यात्रामा गोल्डेन होम केयर, किङग्स होम हेल्थ केयरसम्म पुगेको छ जसको बजार पेन्सिलभेनिया राज्यका मुख्य सबैजसो शहरमा फैलिएको छ।
उनको ब्यबसायको फैलावट पेन्सिलभेनिया राज्यको मुख्यह्यारिसवर्ग, स्क्रयान्टन ल्यांकाष्टर, म्याक्यानिसवर्ग, पिट्सवर्ग, इरी गरी ६ मुख्य शहरमा छ। यो राज्यमा ४० हजार हाराहारी नेपालीभाषी भुटानी बस्छन्। ओहायो राज्यपछि सवैभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी बस्ने राज्य यही पेन्सिलभेनिया हो। त्यसो त पेन्सिलभेनियाबाहेक उनको ओहायोको राजधानी कोलम्बसमा पनि ओमेगा नामक होम केयरमा संलग्नता छ, स्थानीय नेपालीभाषी भुटानी साथीहरुको सहकार्यमा।
‘आफ्नो मातृभुमिबाट लखेटिएपछिको दुखदायी जीवन, चरम दुख, संघर्ष बेहोरेका थुपै्र नेपालीभाषी भुटानीहरु तेस्रो मुलुकमा आफ्नो, बल, मेहनत र पौरखले समृद्घितर्फ लम्किरहेका एउटा सशक्त उदाहरण हुन् नेत्र आचार्य’, नेपालीभाषी भुटानी समुदायका अगुवा ह्यारिसवर्ग निवासी नारद पोखरेल भन्छन् ‘उनको यो लोभलाग्दो सफलताले हाम्रो समुदायका धेरैका लागि उत्पे्ररणा मिल्छ।’
फैलिदो ब्यबसायिक क्षेत्र
नेत्रको ब्यवसाय होम केयरमा मात्र अब सीमित छैन। ब्यबसायको आयातन विभिन्न फरक फरक क्षेत्रमा फैलिँदो छ। जस्तो—घर जग्गा कारोबार, सपिङ कम्प्लेक्स, टाउन हाउस आदि। ह्यारिसवर्गमा आचार्य ग्रुप रियलस्टेट एलएलसी नामको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनी छ,जसले घर किनबेच गर्नेदेखि पुराना घर किनेर ‘रिमोडलिङ’ गरेर बेच्छ।
त्यस्तै टाउन हाउस किनेर भाडामा लगाएको छ। ह्यारिसवर्गको डेरी स्ट्रिटको ४०००० स्क्वायर फिटको डेरी सपिङ सेन्टर यिनै तीन आचार्य दाजुभाइको हो, जुन प्लाजामा नेपाली ग्रोसरी पसलदेखि कपडा पसल, सुन पसल, संगीत स्कुल, ब्युटीपार्लर लगायत छन्। ‘एउटै ब्यवसायमा भर पर्दा त्यो सधै एउटै गतिमा राम्रै भइरन्छ भन्ने नहुन पनि सक्छ’, नेत्र भन्छन ‘त्यसैले बिभिन्न फरक फरक क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं।’
उनको अर्को कम्पनीमा उण्टभ्याली इन्टरप्राइजेजले नेपालीभाषा अनुवादको सेवा उपलब्ध गराउँछ। क्रिएटिभ एण्ड कन्सल्टिङले होम केयर खोल्न चाहनेहरुलाई सहयोग गर्छ। यस बाहेक ब्राइटउडएडल्टडे केयर संचालनको अन्तिम तयारीमा छन् उनी। जसमा बृद्धबृद्धा राखेर हेरचाह गरिन्छ।
‘हामीले सक्दो लगानीका क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै गएका छौं, यो सफलतामा म सँगै मेरा ‘इनर्जेटिक’, ‘मोटिभेटेड’२ भाइहरुको भूमिका उत्तिकै छ’, नेत्र भन्छन् ‘सँगै समुदायका बौद्धिकब्यक्तित्वहरुको साथ सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।’
उनले यसअघि नै नेपाली ग्रोसरी पसल र रेष्टुरेन्ट चलाएका थिए। भोजन घर नामक चल्तीको रेष्टुराँ थियो, जुन कोरोनाको महामारीपछि उनले बिक्री गरे । त्यसैगरी नेपाली समान पाउने ग्रोसरी बिएनएन इन्टरनेशनल सुपरमार्केट केही महिना पहिले बेचेका थिए। त्यसो त फेरि अर्को नयाँ रेष्टुरेन्ट संचालनका लागि कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको छ-नेत्रको टिमको।
एक दशक भुटानको विदेश मन्त्रालयमा काम गरेका तथा रोयल भुटनिज एम्बेसी नयाँ दिल्ली भारतमा कुटनीतिज्ञको रुपमा काम गरेका नारायण कटेल तेस्रो मुलुक आएर छोटो अवधिमै हाम्रो समुदायको नाम, प्रतिष्ठा राख्ने गरी हासिल गरेको ब्यवसायिक समृद्धि साँच्चिकै प्रसंसा योग्य भएको बताउँछन्।
नेपालीभाषी भुटानी समाजको ठूलो हिस्सा होम केयरको ब्यबसायमा छ, तर शुरुबातमा यो बाटो समात्ने श्रेय नेत्रलाई जान्छ । होमकेयरको क्षेत्रमा पहिलो काम गर्ने उनी नै थिए। समुदायले उनै मार्फत यो क्षत्रेको धेरै कुरा जान्न पायो।
हाल अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियापिट्सबर्ग निवासी भुटानी समाजका अगुवा उनी नेत्रको सफलताप्रति गर्व गर्दै भन्छन्, ‘आत्मविश्वास, आँट, आकाँक्षा र केही गर्ने हुटहुटी भएपछि जीवनमा जहाँ गएर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुनुहन्छ उहाँ।’
रहरलाग्दो ब्यवसायिक उचाइ हासिल गरेका उनी समुदायका गाह्रा अप्ठ्यारा तथा परोपकारी काममा निरन्तर हातमालो गर्दै आएका छन्। आफ्ना समुदायका युवाहरु संलग्न रहेका क्रिकेट, भलिवल, फुटबलजस्ता खेलहरुमा खेलाडीलाई नियमित सहयोग गर्दैै हौसला प्रदान आएका छन् चाहे त्यो पेन्सिलभेनियमाहोस या ओहायोमा। ह्यारिसबर्गको श्री लक्ष्मीनारायण हरिहर धाममन्दिर निर्माणका लागि होस या त्यही नेपालीभाषाको स्कुल संचालनमा होस उनको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
हिन्दु धर्म तथा सास्कृतिक संगठन अमेरिकाका अध्यक्ष डा.तुलाराम न्यौपाने भन्छन्, ‘हाम्रो संस्थालाई ६—७ बर्षदेखि निरन्तर सहयोग गर्दै आउनु भएको छ, थुप्रै परोपकारी काममा सहयोग गरेपनि प्रचारबाजी गरेर मैले सहयोग गरें, पैसा दिए“ भन्दै हिँडेको थाहा छैन।’
समाजका अप्ठ्यारा समस्यामा आफू सधैं सहयोगी भूमिकामा रहने बताउँछन् नेत्र। ‘अबका दिनमा सामाजिक हित, परोपकारी काम गरी आफ्नो समुदायलाई अगाडि ल्याउने भूमिकामा अझै सशक्त उपस्थिति जनाउनेछु’, उनी भन्छन्।
भुटानको सर्वाङ जिल्लाको पङखे गाँउको दोभान ब्लकमा जन्मिएका नेत्रका हजुरबुबा रुद्रमणि आचार्य भुटानका चिनिएका ब्यापारी तथा जनप्रतिनिधि थिए। उनको ज्याङखुरुङ, पाटाबारी लगायतका थुप्रै ठाउँमा अलैंची बगान थियो।
जातीय सफायाको नाममा भुटानी शासकले दक्षिणी भुटानमा रहेका नेपालीभाषी भुटानी (ल्होत्साम्पा) लाई जन्मभूमिबाट लखेट्न थालेसँगै जनप्रतिनिधि (कारबारी) रहेका हजुरबालाई ‘यति दिनभित्र यति वटा परिवार यहाँबाट खेदाऊ’ भन्ने उर्दी आउन थाल्यो।
आफ्नै नेपालीभाषी दाजुभाइ, छिमेकी, गाउँलेलाई उनले त्यहाँको शासकसँग मिलेर खेदाउने कुरै थिएन। त्यसपछि विस्तारै विभिन्न ‘टर्चर’ ले देशै छोड्न बाध्य भयो नेत्रको परिवार।
भुटानको त्यो जन्मघर, गाइबस्तुले भरिएको गोठ, खेतबारी, फलफूलले अनि अलैंचीले भरिएको बगान अनि आफ्नो माटो छोडेर हिँड्दा उनको जीवन निष्पट अ“ध्यारो भयो। जीवनमा ठूलो पहिरो गयो। परिवारसँगै सन १९९१ मा उनी झापाको गाह्रामुनि आएर बसे केही महिना।
त्यसपछि गोलधाप शरणार्थी शिविरमा जीवनका अनेक रंग देखे। दमकस्थित बेलडाँगी शरणार्थी शिविर जीवनका उर्वर वसन्तहरु बिताए। शरणार्थी शिविरको छाप्रोमा जीवनका चरम दुख, पीडा, ताप, सघर्षका रंगहरु भोगे आचार्यले। प्लाष्टिक र बासका भाटाले बारेका चुहिने छाप्रोभित्र दुखका महासागर छिचोले। जीवन भोगाइका सुदूर क्षणहरु साँच्चिकै हृदय बिदारक कथानक बन्छ।
पढ्नका लागि बिहान ५ बजे साइकलमा दुध बेच्दै हिँडे। दुखको तापमा विहान धर्तिमा उज्यालो खस्न नपाउँदै बेलडागी नजिकैको दुम्से गाँउपुगेर शिविरमा दुधल्याएर छाप्रो छाप्रोमा पुर्‍याए। ‘शिविरको बसाइ कति अभावमा बाँचियो भने २ कक्षामा पढ्दा चप्पल लगाउन पाएको थिएँ, ४ कक्षापुग्दा मात्रै लामो पेन्ट लगाउन पाएको थिएँ’ उनी सुदुर अतितमा फर्किन्छन्। जीवनका २० वसन्त शिविरमा कष्टप्रद जीवन बिताएका नेत्र बिगत आधा दशकदेखि धेरैको सपनाको देश समृद्धशाली अमेरिकामा आफू पनि धेरैको सपनाजस्तै समृद्धशालीनै बनेका छन्।
शिविरमा उनलाई पढाएका डा हेमन्त लामा शिविर भित्रको अभाव, संघर्ष झेलेर तेस्रो मुलुकमाअनपेक्षित फड्को मारेको बताउँछन्। ड्रुकइन्टरनेशनल सितेरियो कराते डो एसोसियसन अमेरिकाका अध्यक्ष तथा शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता उनी भन्छन्, ‘उनले आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय ढंगले छलाङ मारेका छन्। यस्ता समृद्धिका नमुनाबाट सिंगो समाजले गर्व गर्नुपर्छ, वास्तब मै भन्नु पर्दा उनी हाम्रो समाजले थाहनपाइरहेको हीरा हो।’
भुटानी शासकको अन्याय, अत्याचार, दमनले त्यहाँको सुखी जीवन छोडेर बर्षौ दुखको हुन्डरी र अनिश्चिताको भुमरीमा रुमलिएका उनले आज उनको तेस्रो देश अमेरिकामा आफ्नो कामबाट मारेको छलाङका साक्षी उनका ७७ बर्षीय हजुरबुबाको गर्वले छाती फुल्छ।